Vavaka mba hanonofinofiny ahy. ? Anio hariva ary mieritrereta ahy
Ny vavaka ho azy hanonofy ahy. Mety ho fihetsika feno fitiavan-tena io fa ny marina dia mety ho a ny vavaka amin-kitsimpo indrindra azontsika atao eo amin'ny fiainantsika.
Ny fahazoana nofinofin'ny olon-kafa dia mety ho olana saro-pady raha tsy atao amin'ny fomba mandray andraikitra, izany no tokony hahalalantsika ny zavatra rehetra napetrak'ity fehezanteny ity alohan'ny hanaovany azy mba handraisana andraikitra.
1 Inona ity vavaka ataonao ho nofinofisinao amiko ity?
2 Vavaka hivavaka amiko anio hariva
3 Vavaka mba hieritreretana ahy ary hanonofy ahy
4 Vavaka amin'ny Fahafatesana Masina mba manonofy amiko
5 Ny vavaka mba tsy ho fatory ny misaintsaina ahy
5.1 Azoko lazaina ve ny vavaka rehetra?
Inona ity Vavaka mba hanonofinofy amiko?
Ny tena tanjona dia mazava, ny hahazoana ny olona manonofy anao, fa na amin'ny nofy aza dia manadino ny tenanao.
Se Azonao ampiharina amin'ireny tranga ireny ny fifandraisana akaiky Raha vita, dia mety ho marefo na mora kokoa ny manadino anao ny olon-kafa.
Nilaza izy ireo fa mahery ny nofy ary izany no anontaniantsika indrindra ny hijanonana ao anatin'izy ireo mandritra ny fotoana maharitra mba hanamafisana ny fahatsapana.
Ity vavaka ity dia azo atao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra.
Tsy maninona na dia manana fotoana betsaka io olona io nefa tsy mahita antsika na miresaka amintsika, ny tena zava-dehibe dia ny eritreretiny sy nofinofy amintsika amin'ny fotoana rehetra.
Vavaka hivavaka amiko anio hariva
Manonofy miaraka amiko anio, ry malalako,
Eny fa ny fanahintsika dia voatendry hiara-monina!
Manonofy miaraka amiko anio, ry malalako mandrakizay
Izay rehetra notadiavinao;
Mampifanaraka ny herin'ny lahatra aho
Tao amin'ny nocturnal anao no noheveriko fa ny tarehiko
Ary ny feoko dia ireo
Manatrehana anao anio hariva.
Hiaraka isika dia manidina amin'ny alika tsy fantatra;
Hiara-mandeha amin'ny ranomasina lavitra isika;
Izahay dia hifaly amin'ny ala tropikaly;
Ny sainao dia ny fetra fa aiza
Hanao an'izany ianao, ho anao sy ho ahy foana.
Enga anie ho tonga ao an-tsainao ireo teny ireo
Milentika anaty ao anaty ianao
Tsy mandositra ny vatanao mihitsy aho
Na tsy hanakimpy ny masonao aza ianao
Araraoty ny herin'ny vavaka hivavaka amiko anio hariva.
Karazana vavaka voafaritra manokana izany satria mangataka ny hiseho amin'ny nofinofinao tamin'io alina io mivavaka isika.
Izany fotsiny no mahatonga an'io mahery kokoa ary mahomby.
Azo inoana fa, taorian'io alina io dia nianarantsika ny momba ilay nofinofiny teo am-pelatanany taminay satria izy dia nanandrana nifandray matetika taminay satria ny nofy dia toa henjana tokoa amin'ny fomba miezinezina.
Vavaka mba hieritreretana ahy ary hanonofy ahy
Antsoy aho izao dieny izao ...
(Lazao ny anaran'ilay olona)
Amin'izao fotoana izao, na aiza na aiza. Amin'ity indray mitoraka ity dia hampidirinao amiko ny sainao sy ny eritreritrao ...
(Manonona ny anaranao)
Takatrao fa tsy afaka miaina tsy misy aho. Amin'izao fotoana izao dia hanomboka hanary ny avonavonao ianao. Vonona hiantso ahy ianao amin'izao fotoana izao. Amin'izao fotoana izao, ianao no mieritreritra ahy ...
Hiezaka hanohitra ve ianao? Aza manohitra. Raha ianao…
(Mitanisa ny anaran'ny olona) Aza miantso ahy intsony ankehitriny, hiantso ahy ianao any aoriana any. Izao anefa dia afaka mahazo antoka ianao fa hiantso ahy ianao.
Fantatrao fa tia ahy ianao ary tsy afaka ny tsy eo aho. Amin'izao fotoana izao dia mieritreritra ahy ianao ...
(Lazao ny anaranao) Miangavy ireo anjely telo aho, i Miguel, Gabriel ary Rafael, hanazava ny fonao ...
(Lazao ny anaran'ny olona) ary esory ny fanontaniana rehetra. Ny tian'i Mikaela ho esorina aminao dia ny fanahin'ny ratsy sy ny fitaoman'ny ratsy rehetra.
Gabriel dia manambara aminao ... (Mitanisa ny anaran'ny olona) Ny anarako, avelao hanohina ny sofinao ny teny hoe "Fitiavana" ka tsarovy aho ...
(Lazao ny anaranao) Rafael hampiasa balsama manasitrana hanasitranana ny tsy fahatokisana izay nivelona ao am-ponao, ary hitazona ny tara-pitiavana "Fitiavana" sy faniriana ho ahy misokatra ...
(Lazao ny anaranao).
Midira ao an-tsain'ny olon-kafa ary miantraika amin'izy ireo matory foana manonofy aminay Toa fangatahana be loatra tena na mikorontana be ihany ary mety hieritreritra ny sasany fa mpanafika isika noho ny fidirany amin'ny feon'ny fieritreretan'ny olona nefa tsy nahazoana alalana, fa ny marina dia ny hanao fahagagana fotsiny no ampiasaintsika, mampiasa ny fitaovam-piadiana ara-panahy ho sitrakao.
Tsy maintsy mahazo antoka isika, fahatokisana ny finoana an'izany Ity fehezanteny ity dia hanao ny vokatra irina ary tsy miteraka fahasosorana na fanelingelenana tsy tian'ny sasany ary noho izany tsy tsara noho ny fitazonana ny fo ho salama amin'ny faniriana ratsy sy ny angovo ratsy.
Vavaka amin'ny Fahafatesana Masina mba manonofy amiko
Amin'ny herin'i Santa Muerte sy ny fanahy telo izay niandrasan'i Santa Muerte ny JOGF Ho avy izao Amin'ny alàlan'ny herin'i Santa Muerte sy ny fanahy telo izay hitan'i Santa Muerte an'i JOGF Dia ho avy ao aoriako ny YJDC.
Ho avy izy ka mandady sy feno fitiavana; faniriana hiverina sy hiala tsiny amin'ny lainga ary mangataka ahy amin'ny fitsarana sy ny fampakaram-bady haingana araka izay azo atao.
Santa Muerte, I YJDC dia hanana izany hery izay hadinon'ny JOGF ka averina mandeha indray mandeha izay vehivavy rehetra mety eo an-dohany ary miverina hitsena ahy ary hanambara ny fahitana ny rehetra.
Santa Muerte dia manalavitra ny JOGF amin'ny vehivavy rehetra, mba ho ao an-dohany ny mitady ahy ao amin'ny YJDC ahy amin'ny fotoana rehetra ankehitriny ary maniry ny ho eo anilako foana izy, fa manana antoka izy fa izaho no vehivavy lavorary ho azy, io JOGF io Tsy afaka miaina tsy misy ny YJDC aho ary ny JOGF dia manana ny sariko foana amin'ny eritreriny, amin'ny fotoana rehetra amin'ny fiainany ...
Amin'izay misy ahy ankehitriny dia i JOGF no hitady ahy satria ny fisainany dia ao anatin'ny YJDC ..
Ary rehefa matory ianao dia manonofy ahy ary rehefa mifoha ianao dia mieritreritra ahy ary maniry ahy, rehefa misakafo dia mieritreritra ahy, rehefa manitsaka izay ianao dia mieritreritra ahy, amin'ny fotoana rehetra amin'ny fiainanao dia eritrereto ny YJDC ahy….
Ity vavaka amin'ny fahafatesana masina ity ny hanonofinako amiko dia iray amin'ireo tsara fantatra.
Tena mahery ary fahagagana Eny ary, ankehitriny dia maro ny fahagagana izay mijoro manoloana ny tontolon'ny fangatahana voavaly amin'ity olana ity.
Fanampiana matanjaka mba tsy hanajanona ny nofinofy momba anao ny olona manokana.
I Santa Muerte dia mety ho lasa namantsika, izay afaka manampy antsika amin'ny toe-javatra hafa fitiavana, izay mety ho very fanantenana.
Ny vavaka mba tsy ho fatory ny misaintsaina ahy
Rehefa vita ireo teny ireo,
Ry malala, ho tafaverina sy manonofy ianao!
Fa ankehitriny, noho ny fahoriana, ny ainao sy ny aiko
Tsy mandry miaraka izy ireo fa ny fitsabahana ihany no ilaina
Ny herin'ny lahatra ka izany no miova ho amin'ny tsara.
Hofinofiko lalina aho,
Ary eo isika dia hifankatia toy ny tsy misy hafa !;
Hifamatotra ny fatorantsika
Ary rehefa mifoha ianao, dia ho feno fitiavana
Avy iza no niandry anao hatrizay.
Henoy ireto teny ireto, ry malala, ireo no hitera-drano
Ny fitiavana izay hivoatra manomboka izao.
Enga anie ny hery izay miaraka amiko foana hanangona azy ireo sy
Raiso ny trano fonenanao ary, rehefa manidy ny masonao ianao,
Atsipazo amin'ny tavanao izany ary apetraho ny sariko
Amin'ny nofinofisinao voalohany anio hariva.
Ity valim-bavaka ity dia mandaitra, satria ny eritreritra dia lasa onjan-drano, toa ny ranomasina, aza mijanona ho tonga sy mandeha, izany rehetra izany miaraka amin'ny tanjona tokana tsy hanadinoantsika ity olona ity.
Noho ny antony sasany dia mety mahita ny tenantsika lavitra isika ary mila manana antony hampisy zavatra ao amin'ilay olon-tiana, hijanona foana amin'ny fotoana rehetra satria ao anatin'ireo toe-javatra iavian'ny vavaka manokana antsika irery.
Ny fianarana ny fampiasana ireo fitaovam-piadiana ara-panahy dia mitaky fotoana, fa ny zava-dehibe indrindra dia ny mitoetra miaraka amin'ny finoana matanjaka sy tsy miova.
Eny, ny valiny dia eny.
Ny vavaka rehetra dia nalamina mba hifanaraka amin'izy rehetra ary hampahomby azy ireo amin'ny toe-javatra tsirairay mety hitranga amin'ny fiainana.
Na manao ahoana na manao ahoana sarotra momba ny fangatahantsika, dia tokony hatoky isika fa raha mangataka am-pinoana isika dia ho afaka hahatratra ny zava-drehetra na dia toa tsy misy aza.
Tianao ny nofinofy hivavaka momba ahy?
Vavaka mba hiantsoana ahy
Ny vavaka ho an'i Saint-cypianian